android N: Google ekpughe Future nke OS - News Ọchịchị
android N: Google ekpughe Future nke OS
Early Mmepụta preview dị na mma batrị-ndụ njikarịcha, ngwa ngwa ngwa ịmafe, multi-window na abalị mode
Isiokwu a na-akpọ “android N: Google na-ekpughe ọdịnihu nke OS” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Thursday 10th March 2016 12.36 UTC
Google ka a tọhapụrụ a nnọọ n'oge preview nke na-esote version nke ya mobile sistemụ - Android N - na gbawara n'etiti ihuenyo multitasking, ụba ndụ batrị na mma Ịma Ọkwa.
-Emekarị Google tọhapụrụ a Mmepụta atụ nke ihe ọhụrụ version nke Android na ụlọ ọrụ ahụ si Mmepụta ogbako, Google m / O, na njedebe nke May. Ọ na-e mere iji ekwe ka mmepe oge iji nwalee ha ngwa ọdịnala na-ewu ọhụrụ akụkụ na-uru nke ọhụrụ atụmatụ na Android tupu ya ufụn ka smartphone emepụta na October.
Afọ a, Otú ọ dị, Google malitere ọnwa abụọ n'isi, na a Mmepụta na beta Mee na-ahapụ ọrụ nwalee ọhụrụ atụmatụ.
Isi nke Android, Hiroshi Lockheimer, kwuru: "Ọ bụ na mbụ karịa mgbe ọ bụla, ọ dị mfe na-agbalị na anyị na-ịgbasa ụzọ n'ihi na ị na-enye anyị nzaghachi. Anyị chọrọ anụ gị na iterate n'elu ikpo okwu na ị - na nke ahụ bụ ihe na-eme Android ike. "
Google na-enwe olileanya na mbụ preview ga-ekwe ka ukwuu ule ka ọ na-enye ọhụrụ Android version ka emepụta na mbụ. Ọ na-ewe ọtụtụ ọnwa maka ọtụtụ smartphone emepụta nyak ọhụrụ na nsụgharị nke Android ha ẹdude smartphones. Nke a pụtara na Google si Nexus smartphones na mbadamba-anọgide naanị ngwaọrụ na-agba ọsọ ọhụrụ version nke Android maka ọnwa.
Ọhụrụ a preview atụmatụ na-enye ihe mbụ lee ihe na-agbanwe ihe ndị kasị-eji mobile sistemụ na ụwa.
Android N multi-window multitasking gosiri na a Nexus 6P na Pixel C. Foto: Google
Nnukwu mgbanwe bụ iwebata a gbawara n'etiti ihuenyo multitasking echiche akpọ Multi-Window, nke na-ahapụ abụọ égwu na-agba ọsọ na otu onye ihuenyo. Ọ bụ ihe gam akporo ama emepụta dị ka Samsung nwere ruo ọtụtụ afọ, ma ga-now-abịa butere n'ime Android N.
The ngwa ọdịnala nwere ike na-agba ọsọ n'akụkụ-na-n'akụkụ ma ọ bụ otu n'elu ndị ọzọ, na gbawara n'etiti resizable eji a Central mmịfe, dị nnọọ ka Microsoft si gbawara n'etiti ihuenyo mode ẹkenam na Windows 8 na 2012 na Apple si iOS 9 tọhapụrụ afọ gara aga.
Android ngwa ọdịnala na-wuru iji a egbuke gburugburu, na ihuenyo-size-amaghị ma Chineke format, nke pụtara na ihe kasị kwesịrị ịrụ ọrụ na-enweghị mgbanwe na ọhụrụ atụmatụ. Mgbe ọ ga-abụ dị na smartphones, atụmatụ ahụ bụ isi iji na ibu ngwaọrụ tinyere phablets na mbadamba dị ka Google si Pixel C.
Ngwa ngwa ngwa ịmafe
Ọrụ ga-enwe ike okpukpu abụọ-enweta na nso nso-eji ngwa ọdịnala button ka ịgbanwee gaa na mbụ na-eji ngwa na-enweghị emeghe na nso nso-eji ngwa ọdịnala ndepụta, ịgbapụ ihe ọsọ bouncing n'etiti ngwa.
Ụra na mbugharị
Mbugharị ọnọdụ ohere ọrụ iji mee ka ihe na ihuenyo ibu maka a ghọtakwuo echiche ma ọ bụ dabara ọzọ na ihuenyo site shrinking ya niile. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Android N ga mejuputa a n'abalị mode na blocks-acha anụnụ anụnụ wavelengths nke ìhè bụ iji gbochie igwe si edebe ndị na-amụ anya. Nke atọ Android ngwa ọdịnala enwewo ike ime otú ahụ n'ihi na a na-eji a red nyo machie na ihuenyo na ọ bụ ihe ahụ Apple ka slated n'ihi na ya ọzọ version nke iOS.
Ọrụ ga-enwe ike ịgbanwe size nke ihe oyiyi na ederede na ihuenyo site na iji Android N ọhụrụ mbugharị mmịfe, nke ga-enyere ndị na-mkpa a bit nke magnification ịhụ ihe na-aga.
The ọhụrụ ngosi ndo ga-a n'elu Ahịrị nke ngwa ntọala, nke onye ọrụ nwere ike ịgbanwe, na otu Ịma Ọkwa. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Android N ga-abịa na ike na-otu Ịma Ọkwa si otu ngwa ọnụ. Ọtụtụ ngwa ọdịnala ama-eme nke a, gụnyere Google si Gmail ngwa, nke nakọtara ozi ọnụ ka ha na-na ohere ọrụ iji mụbaa ha na-agụ Ịma Ọkwa ma ọ bụ ewere ha dị ka otu.
Google si ngwa-reply feature, dị n'ime ya Hangouts na ozi ozi ngwa ọdịnala na Android Wear, ga-aghọkwa ndị a ọkọlọtọ atụmatụ n'ime Android N, ikwe ka ndị ọrụ na kụọ si aza ozi site na ngosi ndo n'ebughị ụzọ banye ngwa.
The ọhụrụ version nke Doze ga-enyere ogologo ndụ batrị mgbe ihuenyo bụ gbanyụọ. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Android 6.0 Marshmallow mere nnukwu mmali na batrị arụmọrụ site na iji atụmatụ akpọrọ Doze, nke na-etinye a ama ma ọ bụ mbadamba n'ime a ala-ike steeti were uko ịchịkwa ihe nwere ike iteta ngwaọrụ elu mgbe na ihuenyo ahụ anya na ọ na-adịghị akpụ akpụ.
Nke a pụtara na mgbe a na ekwentị na-etinye na tebụl na-adịghị metụrụ n'ihi na a mgbe ọ na-uku akp batrị ndụ, ịmachi ihe dị ka internet ohere ka etiti oge.
Android N na-inyịme na atụmatụ na-arụ ọrụ mgbe ihuenyo bụ gbanyụọ ma ekwentị nọ na ngagharị - na a n'akpa uwe ma ọ bụ akpa ka ihe atụ – nke kwesịrị nwere ịrịba nti mmetụta na ndụ batrị.
ata ahu, ngwa ngwa Android
Android N nwekwara a ọhụrụ version nke ya Java Android Oge ojiri gaa (Art), bụ nke gbara na ngwa ọdịnala awụnyere na ekwentị. Ọ bụ ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma, nke pụtara ngwa ọdịnala ga-wụnye ma melite ngwa ngwa na-enweghị mkpa oge nke njikarịcha. Nke a kwesịrị ukwuu belata oge a chọrọ iji wụnye Android mmelite na ndị ọzọ na upgrades.
Google si Project Svelte na-arụ ọrụ na mbenata size na arọ nke Android nke mere na ọ na-ewe obere ohere nchekwa na ike na-agba ọsọ na ala-ike ngwaọrụ, nke kwesịrị ịpụta ọzọ ohere maka ngwa na media.
Developers achọ ịnwale beta version nke Android N nwere ike debanye aha a Nexus ngwaọrụ na Google imelite n'ikuku, na ike ịlaghachi na ọhụrụ version nke Android 6 Marshmallow ke otu ụzọ.
Ndị na-adịghị na-agba ọsọ Google si Nexus ngwaọrụ ga-echere ruo mgbe onye nrụpụta ama na-enweta Android N ke ndaeyo wee inupụ ya n'aka ndị ngwaọrụ, nke ga-abụ na-abụ na 2017.
Android 6.0 Marshmallow: 21 Atụmatụ ịmụta Google si OS update
Google Android exec poached site China si Xiaom ...
Twitter aka ekedep mobile mgbasa ozi mmalite
Germany mocks Google Fiber na 100Gbps WiFi demon ...
20771	5 mkpụrụ okwu, Android, Nkeji edemede, Google, mobile igwe, News, phablets, Samuel Gibbs, Smartphones, software, mbadamba kọmputa, Technology
← 7 -atụghị anya ojiji ikpe maka Virtual Adị Na-adị Ndụ na Mars? →